Kuduudiyaha Burco iyo Warmooganaanta Wasaaradda Caafimaadka | Qaran News
Writen by Qaran News | 6:45 pm 8th Nov, 2019
Warbixintii Burco ee Kudduudiyaha
Kuduudiyaha waxa afka qalaad loo yaqaanaa CHIKUNGUNYA VIRUS
Xannuunka CHIKUNGUNYA; waa xannuun ku dhici kara qofkasta yar iyo waynba, waa xannuun la ogaaday inuu jiro sanadkii 1953 gaar ahaan qaaradda Africa, waa xannuun inta badan sababa Garaac isgoysyadda ah, Xumad, Madax xannuun iyo xaalado kala duwan oo uu qofku dareemo iyadoo ay bogsashadiisu ku xidhan tahay caafimaad kii hore ee qofka.
Waa xannuun ay Maanta burco iyo inta u dhawiba u ildaran tahay kaas oo hoos u dhigay isu socodkii iyo shaqooyinkii caadiga ahaa ee socday kadib markii uu dad badan fadhiisiyey.
Xannuunkan waa markii labaad ee Burco lagu arkay waxaanna inta badan sabab u ah isku socodka bulshada iyo qaniinyadda kaneecadda. Xannuunkani waa mid ku sii Fidaya Burco, waanna mid iskii iskaga taga marka laga reebbo saamaynta iyo xusuusta uu kaaga tagayo qofka uu ku dhaco, Maadaama Burco tahay magaalo balaadhan dad badanina soo dhexmaraan waxa ay markasta La kullantaa xannuunadda dalka ku cusub taasna waxa yarayn kara dawladda oo qorshe ka yeellata dadka xuduudaha ka tallaabaya iyo hubinta caafimaadkooda.
Burco waa magaalo maanta la Nool Xannuunka kuduudiyaha una Baahan gurmad iyo gargaar deg-deg ah oo dawlad iyo shacaba u dhexeeya,
Xannuunkan kuduudiyuhu waa xannuun ka jira caalamka iyo Afrika ba waanna xanuun inta badan ay sabab u noqdaan Kaneecadda iyo Roobabka kala duwan ee ay ka dhashaan cayayaanku.
Kuduudiyuhu Waa xannuun aan Joogto loogu dhiman marka laga reebo qadarta Alle oo uu sabab u noqdo mooyaane, Wuxuunna Burco Hayay saddexdii bilood ee u dambeeyay iyadoo la sheegay in ay u dhinteen Hooyooyin Uur leh iyo dadkale oo waaweyni qaarna imika la ildaran yihiin.
Inta badan xannuunkani wuxuu aad u haleelaa dadka kale ee xannuunadda kale qaba isagoo xaalad adag galiya, tusaale haddii aad tahay hooyo Uur leh waxa khasab ah in Dhakhtarku kugala taliyo in lagu qalo si ilmaha yar ama hooyadda loo kala bad-baadiyo ka dib markii la arkay Hooyooyin dhalay Ilmo yar oo mayda.
Xannuunkan ” Chikungunya” waa xannuun burco 10kii qofba 8 ka midi uu haleeyay ama uu qaaday markaa, waxaanna sabab u ah Iskugudbinta Kaneecadda.
Xannuunkan markii ugu horeysay waxa lagu arkay Degmo ka mida waddanka Tanzania, oo la idhaa Nawala.
1. Xumad aad u badan
2. Muruqyo xanuun
3. Xubno xannuun,
4. Madax xannuun
5. Calool, xanuun.
6. Jidh xannuun.
Xannuunkani Dawo toosa oo jirta ma jirto marka laga reebo qaadashadda irbadaha Xumada iyo Xannuunka, waanna xannuun iskii iskaga taga.
1. Ka hortagga Talaalka.
2. Ka fagawga meelaha kaneecadda leh ama ay jiraan dad qabaa.
3. Kiniinka Xumad jabinta
4. Qaadashadda Dhar aan khafiif ahayn oo jiq kugu ah.
5. Tallooyinka dhakhtarka
Wasaaradda horumarinta Caafimaadka maxaa la Gudboon?
1. Diyaarinta Kooxaha badbaadinta dadka qaba Kuduudiyaha.
2. Baaqyo iyo tallo bixin joogtaa
3. Cisbitaallo iyo waadhadh u gaar ah xannuunkan
4. Shaqaale u tababaran oo qalabaysan.
5. Iskaashi hay’adaha caafimaadka ka dhexeeya oo ay si degdega ugu baaqaan ka hortagiisa iyo badbaadinta dadkaba Sida WHO.
6. Talaalkiisa oo la raadiyo ka dibna bilaash laga dhigo.
Burco Gurmadbay rabtaa..
Dr. Kaafi ayaan si gaara ugu mahadnaqayaa oo xog dheer ila wadaagay.
Allaw ka hay inta aannu wali gaadhi Aamin.
Rakad Mxd Sulta